एकीकृत समाजवादी देशकै निर्णायक शक्तिभएको मेटमणि चौधरीको दाबि !
उक्त भेला हरि पहारीको अध्यक्षतामा रुपन्देही जिल्ला कमिटी सदस्य जीत बहादुर भाटको सञ्चालनमा भएको थियो । विभाजित नभई क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्दै विद्रोहबाट निर्माण भएको बताए ।
पुस २९, २०७८ १:२२
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एकीकृत समाजवादीका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरीले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी देशकै निर्णायक शक्ति भएको दाबि गरेका छन् ।
उनले आफ्नो पार्र्टी एकीकृत समाजवादी आगामी निर्वाचनमा देशकै निर्णायक शक्ति हुने बताए । त्यस्तै गरी एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही जिल्ला इन्चार्ज डा. बालकृष्ण चापागाईले बोल्दै सामाजिक न्याय र समानताका एजेण्डालाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकता दिने बताए ।